मास्क लगाउनु भएको छैन, बसमा चढ्न नपाइएला नि! – Health Post Nepal
मास्क लगाउनु भएको छैन, बसमा चढ्न नपाइएला नि!
२०७८ असोज १४ गते १७:५०
उपत्यकामा मास्क नलगाएका यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा चढ्न रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सवारी साधनको ढोकामा अनिवार्य सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न यातायात व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
कुल स्वीकृति सिटभन्दा बढी यात्रुहरु नचढाउने, मास्क नचलाउने सवारी साधनमा प्रवेशमा नदिने, चालक, सहचालकले अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउनुपर्नेछ।
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण प्रशासनले सार्वजनिक सवारी अनिवार्य रुपमा दैनिक सेनिटाइज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलयले पनि सामाजिक दुरी कायम गर्दै न्युनतम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
चाडपर्वको बेला सवारी साधनको छतमा यात्रा गर्न प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
दशैं, तिहार र छठ पर्व मनाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर न्युनतम सहभागितामा चाडपर्व मनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ । घरभित्र परिवारको सदस्यहरु मात्रै सहभागी भएर पर्व मनाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं